शट ब्लास्टिंग र शट पेनिंगबीच के भिन्नता छ? - समाचार - Gendger Mach مشین कं, लिमिटेड
शट ब्लास्टिंग र शट पेनिंगबीच के भिन्नता छ?
शट ब्लास्टिंग र शट पेरिening निर्माण कार्यमा सामान्य प्रक्रियाहरू हुन्। यदि उद्योगले धातुका भागहरू प्रयोग गर्दछ भने, सम्भावना के यो शट ब्लास्टिंगमा भर पर्छ र चीजहरू बनाउनको लागि पीनिंग।
शट ब्लास्टि and र शट पीनिंग बीच के फरक छ जबकि समान, दुई फरक लक्ष्यहरूका साथ भिन्न प्रक्रियाहरू छन्। तिनीहरूलाई अलग राख्छ के जान्न को लागी पढ्नुहोस्।
शट ब्लास्टिंग भनेको के हो?
उत्पादित मेटल पार्ट्स मोल्डको ठीक बाहिर प्रयोगको लागि तयार छैनन्। तिनीहरूलाई प्राय: पेन्टको एक कोट, पाउडर कोटिंग, वा वेल्डि need कार्यको आवश्यक पर्दछ। तर यो हुनु भन्दा पहिले धातुको भागको सतह सफा हुनुपर्छ।
शट ब्लास्टिंगले थप प्रसंस्करणको लागि चित्रकला वा पाउडर कोटिंगको लागि धातु भागहरू तयार गर्दछ। यो चरण आवश्यक छ कोटको अंशमा राम्रोसँग पालना गर्दछ। शट ब्लास्टिंगले फोहोर वा तेल जस्ता दूषित पदार्थहरू हटाउन सक्दछ, रस्ट वा मिल स्केल जस्ता धातु अक्साइडहरू हटाउन सक्दछ, वा सतह डिब्रर बनाउँदछ यसलाई सजिलो बनाउन।
कसरी शट ब्लास्टिंग काम गर्दछ
शट ब्लास्टिमा घर्षण सामग्रीको एक उच्च-दबाव स्ट्रिमको शूटिंग समावेश छ (शट वा ब्लास्टिंग मिडिया पनि भनिन्छ) धातुको भागको सतह बिरूद्ध। अनुप्रयोगमा निर्भर गर्दै, शटहरू दबाबयुक्त तरल पदार्थ (जस्तै कम्प्रेस गरिएको वायु) वा एक केन्द्रापसारक पा (्ग्रा (ह्विल ब्लास्टिंग भनिन्छ) द्वारा प्रबल हुन सक्छ।
शटको आकार, आकार र घनत्व अन्तिम परिणामहरू निर्धारित गर्दछ। शट ब्लास्टिंगमा प्रयोग हुने धातु घर्षणका प्रकारहरूमा स्टील ग्रिट, तामाको शटहरू, र एल्युमिनियम गोलीहरू समावेश छन्। शट ब्लास्टिंगका अन्य विधिहरूले सिलिका बालुवा, गिलासका मोतीहरू, सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) जस्ता कृत्रिम सामग्रीहरू र कुचिएको कर्नेल जस्ता कृषि सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछन्।
शट पेनिंग भनेको के हो?
शट पनी explainको व्याख्या गर्नका लागि, पहिला पीनिंगको सामान्य धारणा बुझ्नुपर्दछ। यसको सतहमा तनाव लागू गरेर धातुको भौतिक गुणहरू मजबूत गर्न सम्भव छ। यसले धातुको सतह विस्तार गर्दछ, कम्प्रेसिभ तनावको एक तह सिर्जना गर्दछ र टुक्रामा टेन्सिइल तनाव कम गर्दछ।
धातुको सतहलाई यसको शक्ति बढाउन काम गर्नेलाई पेरेनिंग भनिन्छ। परम्परागत विधिमा बल-पिन हथौड़ाको साथ धातुलाई हड्ताल समावेश गर्दछ, जुन ठूलो मात्रामा उत्पादन सेटिंगमा अक्षम छ। आज, अधिकांश उद्योगहरूले यसको सट्टा मेकानिकल शट पेनि emplo प्रयोग गर्छन्।
कसरी शट पेनिंग कार्य गर्दछ
शट पेरि and र शट ब्लास्टिंग दुबै भागको सतह बिरूद्ध सामग्रीको स्ट्रिमको शूटिंग समावेश गर्दछ। शट ब्लास्टि and र शट पनिंग बिच सबैभन्दा ठूलो भिन्नता अन्तिम परिणाम हो। शट ब्लास्टिंगले यसलाई प्रशोधनको लागि तयार गर्न सतह सफा वा चिल्लो बनाउन घर्षणहरू प्रयोग गर्दछ; शट पनिंगले भागको जीवन विस्तार गर्न धातुको प्लास्टिकसिटी प्रयोग गर्दछ।
शट पेनि Inमा, प्रत्येक शटले बल-पिन हथौड़ाको रूपमा कार्य गर्दछ। प्रक्रियाले धातुको भागको सतहलाई बलियो र दरारहरू, थकान, र क्षति प्रतिरोधी बनाउँदछ। उत्पादकहरूले शट पेनिeningको प्रयोग पनि टुक्रालाई बनावट सतह दिनका लागि गर्न सक्छन्।
शट ब्लास्टि withसँग जस्तै, शटको छनोट अनुप्रयोगमा निर्भर गर्दछ। शट पेरि usuallyमा सामान्यत: इस्पात, सिरेमिक वा गिलास शटहरू हुन्छन्। सामग्री पुन: प्रयोज्य छ, यसलाई धातुको भाग सुदृढीकरणको लागि एक कुशल र लागत-प्रभावी प्रक्रिया बनाउँदै।
शट ब्लास्टिंग र शट पेरिening दुबै धातु निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण चरणहरू हुन्। प्राय: यो भाग प्रयोगको लागि तयार हुनु अघि दुबैबाट गुज्रन्छ।
ब्लास्टिंग उपकरण कसरी सेट अप गर्ने?